Jenesis 41 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Josef kọwara nrọ Fero (1-36)
Fero mere Josef onye ukwu (37-46a)
Josef malitere ikpokọta nri n’Ijipt (46b-57)
41 Mgbe afọ abụọ gwụrụ, Fero rọrọ nrọ+ ebe o guzo n’akụkụ Osimiri Naịl. 2 Ná nrọ ahụ, ọ hụrụ ka ehi asaa mara mma ma buo ibu si n’Osimiri Naịl na-apụta, ha nọkwa na-ata ahịhịa ndị dị n’akụkụ osimiri ahụ.+ 3 Ọ hụkwara ehi asaa ọzọ jọrọ njọ ma taa ahụ́ ka ha si n’Osimiri Naịl na-apụta mgbe ndị nke mbụ ahụ pụtachara. Ha guzo n’akụkụ ehi ndị ahụ buru ibu ndị nọ n’akụkụ Osimiri Naịl. 4 Ehi ndị ahụ jọrọ njọ ma taa ahụ́ maliteziri iri ehi asaa ahụ mara mma ma buo ibu. Fero wee teta. 5 Ụra buuru Fero ọzọ, o wee rọọ nrọ ọzọ. Ná nrọ a, ọ hụrụ oko ọka* asaa mịrị n’otu okporo ọka. Ọka ndị ahụ juru eju, maakwa mma n’anya.+ 6 Ọ hụkwara oko ọka asaa ọzọ ndị mịrị mgbe ndị nke mbụ ahụ mịchara. Ọka ndị ahụ fịkpọrọ afịkpọ, ifufe si n’ebe ọwụwa anyanwụ mekwara ka ha kpọọ nkụ. 7 Oko ọka ndị ahụ fịkpọrọ afịkpọ malitekwara ilo oko ọka asaa ahụ juru eju ma mma mma n’anya. Fero wee teta n’ụra ma ghọta na ọ bụ nrọ ka ọ na-arọ. 8 Ma n’ụtụtụ, obi ezughị ya ike. N’ihi ya, o ziri ozi, e wee kpọọrọ ya ndị niile bụ́ ndị dibia anwansi n’Ijipt na ndị niile ma ihe n’Ijipt. Fero kọọrọ ha nrọ ndị ọ rọrọ, ma e nweghị onye nwere ike ịkọwara Fero nrọ ndị ahụ. 9 Onyeisi ndị na-ebunye Fero mmanya wee gwa Fero, sị: “Ana m ekwupụta mmehie m taa. 10 Fero wesara ndị na-ejere ya ozi iwe. N’ihi ya, ọ tụbara m n’ụlọ nga nke dị n’ụlọ onyeisi ndị nche, ma mụnwa ma onyeisi ndị na-emere ya achịcha.+ 11 Mgbe e mechara, anyị abụọ n’otu n’otu rọrọ nrọ n’otu abalị. Nrọ onye nke ọ bụla n’ime anyị nwere ihe ọ pụtara.+ 12 Ma e nwere nwa okorobịa Hibru anyị na ya nọ n’ebe ahụ. Ọ bụ onye na-ejere onyeisi ndị nche ozi.+ Mgbe anyị kọọrọ ya nrọ anyị,+ ọ kọwaara onye nke ọ bụla n’ime anyị ihe nrọ ya pụtara. 13 Ihe niile mere kpọmkwem otú o si kọwaara anyị ha. E nyeghachiri m ọrụ m, ma a kwụwara onye nke ọzọ n’osisi.”+ 14 Fero wee zie ozi ka a kpọọ Josef,+ ha sikwa n’ụlọ mkpọrọ* kpọpụta ya ngwa ngwa.+ Ọ kpụrụ isi ya na ajị agba ya, gbanweekwa uwe ya ma gakwuru Fero. 15 Fero gwaziri Josef, sị: “Arọrọ m nrọ, ma e nweghị onye nwere ike ịkọwa ya. Ma, anụla m na ọ bụrụ na a kọọrọ gị nrọ na i nwere ike ịkọwa ya.”+ 16 Josef wee sị Fero: “E nweghị ihe m bụ. Ọ bụ Chineke ga-agwa Fero ihe ga-adị ya mma.”+ 17 Fero wee kọọrọ Josef, sị: “Arọrọ m nrọ ebe m guzo n’akụkụ Osimiri Naịl. 18 Ná nrọ ahụ, m hụrụ ka ehi asaa mara mma ma buo ibu si n’Osimiri Naịl na-apụta. Ha malitekwara ịta ahịhịa ndị dị n’akụkụ Osimiri Naịl.+ 19 M hụziri ehi asaa ọzọ ndị pụtara mgbe ndị nke mbụ ahụ pụtachara. Ha na-asọ oyi, jọọkwa njọ ma taa ahụ́. Ahụtụbeghị m ehi jọrọ njọ otú ahụ n’Ijipt niile. 20 Ehi ndị ahụ tara ahụ́ ma jọọ njọ malitere iri ehi asaa mbụ ahụ buru ibu. 21 Ma mgbe ha richara ha, mmadụ enweghị ike ịma na ha riri anụ ndị ahụ n’ihi na ha ka jọrọ njọ ma taa ahụ́ otú ha dịbu. M wee teta. 22 “M mechara rọọ nrọ ọzọ. Ná nrọ a, m hụrụ oko ọka asaa mịrị n’otu okporo ọka. Ọka ndị ahụ juru eju, maakwa mma n’anya.+ 23 M hụkwara oko ọka asaa ọzọ ndị mịrị mgbe ndị nke mbụ ahụ mịchara. Ọka ndị ahụ fịkpọrọ afịkpọ, pee mpe, ifufe si n’ebe ọwụwa anyanwụ mekwara ka ha kpọọ nkụ. 24 Oko ọka ndị ahụ pere mpe malitere ilo oko ọka asaa ahụ mara mma n’anya. M wee kọọrọ ndị dibia anwansi+ ihe a m rọrọ ná nrọ, ma e nweghị onye nwere ike ịkọwara m ya.”+ 25 Josef wee sị Fero: “Nrọ Fero rọrọ bụ otu. Ọ bụ ihe ezi Chineke ga-eme ka ọ gwara Fero.+ 26 Ehi asaa ahụ mara mma bụ afọ asaa. Oko ọka asaa ahụ dị mma bụkwa afọ asaa. Nrọ abụọ ahụ bụ otu. 27 Ehi asaa ahụ tara ahụ́ ma jọọ njọ, bụ́ ndị pụtara mgbe ndị nke mbụ ahụ pụtachara, bụ afọ asaa. Oko ọka asaa ahụ ihe na-adịghị, bụ́ ndị ifufe si n’ebe ọwụwa anyanwụ mere ka ha kpọọ nkụ, ga-abụ afọ asaa a ga-enwe ụnwụ. 28 Ọ bụ nnọọ ihe ahụ m gwara Fero: Ezi Chineke emeela ka Fero hụ ihe ọ chọrọ ime. 29 “A ga-enwe afọ asaa nri ga-eju ebe niile n’Ijipt. 30 Ma afọ asaa ahụ gachaa, a ga-enwe afọ asaa ụnwụ ga-adị ebe niile. A ga-echefukwa oge ahụ nri juru ebe niile n’Ijipt. Ụnwụ ahụ ga-emebisị ala a.+ 31 Ụnwụ ahụ ga-emekwa ka a ghara icheta na e nwere mgbe nri juru n’ala a n’ihi na ọ ga-akpụ ọkụ n’ọnụ. 32 E mere ka Fero rọọ nrọ ahụ ugboro abụọ maka na ezi Chineke ekpebiela na ihe a ga-emerịrị. Ezi Chineke ga-eme ya n’oge na-adịghị anya. 33 “Ugbu a, ka Fero chọta nwoke nwere uche, nke makwa ihe ma mee ya onyeisi n’ala Ijipt. 34 Ka Fero mee ihe a: ka ọ họpụta ndị ga na-elekọta ebe dị iche iche n’ala a. Fero ga-achịkọtakwa otu ụzọ n’ụzọ ise nke ihe niile ala Ijipt ga-emepụta n’ime afọ asaa ahụ nri ga-eju ebe niile.+ 35 Ka ha chịkọta nri niile ala ga-emepụta n’afọ ndị a nri ga-eju ebe niile. Ka ha kpokọtakwa ọka n’obodo dị iche iche ma chekwaa ha n’ebe ahụ. Ọka ndị a ga-abụ nke Fero.+ 36 A ga na-eri ihe oriri ndị ahụ n’ime afọ asaa ahụ ụnwụ ga-adị n’Ijipt, ka ụnwụ ahụ ghara ịla ala a n’iyi.”+ 37 Ihe a o kwuru dị Fero na ndị niile na-ejere ya ozi mma. 38 Fero wee gwa ndị na-ejere ya ozi, sị: “È nwere ike ịchọta nwoke ọzọ dị ka onye a mmụọ Chineke na-arụ ọrụ n’ime ya?” 39 Fero gwaziri Josef, sị: “Ebe ọ bụ na Chineke emeela ka ị mara ihe a niile, e nweghị onye nwere uche ma mara ihe ka gị. 40 Ọ bụ gị ga na-elekọta ụlọ m, ndị obodo m niile ga na-erubekwara gị isi.+ Ọ bụ naanị mụnwa bụ́ eze ga-aka gị ukwuu.” 41 Fero gwakwara Josef, sị: “Lee, m na-eme gị onyeisi n’ala Ijipt niile.”+ 42 Fero wee gbapụta mgbaaka o ji aka ihe akara gbanye ya Josef n’aka ma yiwe ya ezigbo uwe e ji ákwà linin kpaa, nyawakwa ya ihe olu ọlaedo n’olu. 43 O nyekwara ya ụgbọ ịnyịnya ya nke abụọ kacha mma ka o jiri ya gbagharịa. Mgbe ọ nọ n’elu ụgbọ ịnyịnya ahụ, ndị mmadụ nọ na-eti mkpu n’ihu ya, sị, “Avrek!”* Fero si otú a mee ya onyeisi n’ala Ijipt niile. 44 Fero gwakwara Josef, sị: “Ọ bụ m bụ Fero, ma e nweghị onye ga-eme otu mkpụrụ ihe* n’Ijipt niile ma ọ bụrụ na i nyeghị onye ahụ ikike.”+ 45 Mgbe e mechara, Fero gụrụ Josef Zafenat-pania ma kpọnye ya Asinat+ nwa Pọtifera ka ọ bụrụ nwunye ya. Pọtifera bụ onye nchụàjà Ọn.* Josef wee malite ilekọta Ijipt.*+ 46 Josef dị afọ iri atọ+ mgbe ọ bịara n’ihu Fero eze Ijipt.* Josef wee si n’ihu Fero pụọ gagharịa Ijipt niile. 47 N’ime afọ asaa ahụ nri juru ebe niile, ala ahụ mepụtara nri nke ukwuu. 48 Ọ nọ na-achịkọta nri niile ala Ijipt mepụtara n’afọ asaa ahụ. Ọ na-ekpokọta ha n’obodo dị iche iche. N’obodo nke ọ bụla, ọ na-achịkọta nri si n’ubi ndị gbara obodo ahụ gburugburu ma chekwaa ha n’obodo ahụ. 49 Josef nọ na-ekpokọta ọka n’ụba. Ọka ndị ahụ hiri nnọọ nne ka ájá dị n’oké osimiri. Ọ nọ na-ekpokọta ha ruo mgbe ha mechara kwụsị ịtụ ha atụ̀ maka na e nweghịzi ike ịtụ ha atụ̀. 50 Tupu afọ a ga-enwe ụnwụ ahụ eruo, a mụụrụ Josef ụmụ nwoke abụọ.+ Ọ bụ Asinat nwa Pọtifera, onye nchụàjà Ọn,* mụụrụ ya ụmụ ahụ. 51 Josef gụrụ nke ọkpara Manase,*+ maka na ọ sịrị, “Chineke emeela ka m chefuo nsogbu m niile nakwa ezinụlọ nna m niile.” 52 Ọ gụkwara nwa ya nke abụọ Ifrem,*+ maka na ọ sịrị, “Chineke emeela ka m mụọ ọmụmụ n’ala ebe m nọ hụjuo anya.”+ 53 Afọ asaa ahụ nri juru ebe niile n’Ijipt wee gwụ.+ 54 Afọ asaa ahụ a ga-enwe ụnwụ wee malite otú Josef kwuru.+ Ụnwụ ahụ dara n’ebe niile. Ma nri* dị n’Ijipt niile.+ 55 N’ikpeazụ, ụnwụ ahụ malitere ịkpa ndị mmadụ aka n’ebe niile n’Ijipt. Ndị mmadụ wee malite ịrịọ Fero ka o nye ha nri.+ Fero gwaziri ndị Ijipt niile, sị: “Gakwurunụ Josef. Meenụ ihe ọ bụla ọ gwara unu.”+ 56 Ụnwụ ahụ nọ na-akpa ndị bi n’ebe niile n’ụwa aka ọjọọ.+ Josef wee malite imeghe ebe niile e kposara ọka ma na-eresị ya ndị Ijipt+ maka na ụnwụ ahụ na-akpazi ndị Ijipt aka ọjọọ. 57 Ndị si n’ebe niile n’ụwa bịakwara n’Ijipt ka ha si n’aka Josef zụrụ nri, n’ihi na ụnwụ ahụ nọ na-akpa ndị bi n’ebe niile n’ụwa aka ọjọọ.+
^ “Avrek” nwere ike ịbụ mkpu a na-eti iji gwa ndị mmadụ ka ha kwanyere mmadụ ùgwù.
^ Na Hibru, “ga-eweli aka ya ma ọ bụ zọlie ụkwụ ya.”
^ Ma ọ bụ “ịgagharị n’Ijipt.”
^ Ma ọ bụ “mgbe ọ malitere ijere Fero ozi.”
^ Manase pụtara “Onye Na-eme Ka E Chefuo Ihe.”
^ Ifrem pụtara “Ịmụ Ọmụmụ Okpukpu Okpukpu.”